दुईजनाको बैना डुब्यो, यस्ता पनि राजदूत भए ! कांग्रेसकै नेता सोध्छन्, ‘यसले कांग्रेसको साख कहाँ जान्छ ?’ - Pahilo News
दुईजनाको बैना डुब्यो, यस्ता पनि राजदूत भए ! कांग्रेसकै नेता सोध्छन्, ‘यसले कांग्रेसको साख कहाँ जान्छ ?’
११ फागुन । सरकारले सोमबार विभिन्न १४ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको छ । चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि हतार–हतार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाली रहेका १३ देश र प्रस्तावित स्पेनसहित १४ देशका लागि सत्तारूढ दलहरूको भागबन्डामा राजदूत सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, बौद्धिक जगत्मा व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । खासगरी राजदूत नियुक्तिमा तीन खालको मापदण्डलाई आधार बनाइएको बताइन्छ । पहिलो– पहिल्यै पैसा बुझाएका प्रिपेडवाला, दोस्रो– पछिसम्म पनि आर्थिक रूपले काम लाग्ने र तेस्रो– नातागोताका । कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि पैसा खाएर म्यानपावर व्यवसायीलाई भर्ना गर्न थालिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि स्वतःस्फूर्त सरकारको आलोचना बढ्न थालेको छ ।
१४ जनामध्ये तीनजना प्रस्तावित राजदूत म्यानपावर व्यवसायसँग संलग्न रहेको बुझिएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरमको कोटाबाट ओमानका लागि सिफारिस शर्मिला पराजुली र नेपाली कांग्रेस कोटाबाट कतारका लागि सिफारिस रमेशप्रसाद कोइराला र यूएईका लागि सिफारिस आशा लामा म्यानपावर व्यवसायसँग संलग्न रहेको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार पराजुलीकोे सिंगै परिवार म्यानपावर व्यवसायमा सक्रिय छ । बानेश्वरको थापागाउँमा उनका पति विमल ढकालका नाममा फ्लोरिड नामको म्यानपावर कम्पनी छ । बीएसडी ह्युमन रिसोर्स सोलुसन, रोयल डाइमन्ड रिक्युटमेन्टजस्ता युवायुवती विदेश सप्लाई गर्ने कम्पनीहरूमा शर्मिला र उनका परिवारजनको संलग्नता रहेको बताइन्छ । उनी यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि फोरमकै कोटाबाट ओमानका लागि सिफारिस भएकी थिइन् । पछिल्लो समय उनी ओमानकै लागि कामदार पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको बताइन्छ ।
कांग्रेस कोटाबाट कतारका लागि सिफारिस कोइरालाको पनि म्यानपावर व्यवसायमा संलग्नता रहेको बुझिएको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा उनी तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सल्लाहकार थिए । उनी कमर्स क्याम्पस मीनभवनमा प्राध्यापन पेसामा पनि संलग्न थिए । यूएईका लागि सिफारिस लामा पनि म्यानपावर व्यवसायसँग संलग्न रहेको स्रोतले बतायो । बूढानीलकण्ठमा रहेको डेफोडिल स्कुलका सञ्चालिकासमेत रहेकी लामाले आशा फाउन्डेसन नामक संस्था चलाउदै आएको छ । यो संस्थाले असहाय महिलाका पक्षमा काम गर्ने बताए पनि भित्रभित्र भने महिला ओसारपसारको काम गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस कोटाबाटै दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस अर्जुनजंगबहादुर सिंह पूर्वसांसद हुन् ।
म्यानमारका लागि सिफारिस भीम उदास गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का पूर्वउपाध्यक्ष हुन् भने बंगलादेशका लागि सिफारिस चोपलाल भुसाल कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालका पति हुन् । श्रीलंकाका लागि सिफारिस विश्वम्भर प्याकुरेल नाम चलेका अर्थशास्त्री हुन् । उनलाई श्रीलंकाजस्तो देशका सिफारिस गरेर कांग्रेसले उनको योग्यताको कदर नगरेको गाइँगुइँ कांग्रेस वृत्तमै चल्न थालेको छ । उनी कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतका ‘क्लासमेट’ पनि हुन् ।
सत्ता साझेदार अर्को दल राप्रपाबाट जापानका लागि सिफारिस ०६४ को संविधानसभामा कांग्रेस कोटाबाटै सभासद् भएकी थिइन् । उनी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासू पनि हुन् । स्पेनका लागि सिफारिस भरत रायमाझी सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी हुन् । दरबार हत्याकाण्डका बेला उनी दरबाभित्रै रहको शाही रक्षक बाहिनीमा बाहिनीपति थिए । इजरायलका लागि सिफारिस निरञ्जन थापा पञ्चायतकालमा गृह राज्यमन्त्री थिए ।
दुईको बैना डुब्यो
राजदूतका लागि पार्टीलाई बैना रकम बुझाइसकेका दुईजनाको भने बैना रकम डुबेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ । स्रोतका अनुसार दिव्यमणि राजभण्डारी र खगेन्द्र बस्नेतले राजदूत बन्नका लागि पहिल्यै राप्रपा नेपाललाई पैसा बुझाइसकेका थिए । उनीहरूसँग पैसा लिएर अघिल्लो सरकारका पालामा राप्रपा नेपालको कोटाबाट भण्डारी इजरायलका लागि बस्नेत जापानका लागि सिफारिस भएका थिए । भण्डारीसँग त सभासद् बनाउन भनेरै मोटो रकम लिएको स्रोतले बतायो । तर, सभासद् बनाउन नसकेकपछि राजदूत बनाउने भनेर थुम्थुम्याएको थियो । तर, उनी अहिले राजदूतमा पनि परेनन् ।
कांग्रेसकै नेता आश्चर्यचकित
उता कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले राजदूत नियुक्तिको निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताएका छन् । फेसबुकमार्फत उनले लेखेका छन्ः
‘नेपाली काँग्रेस शहिदको बलिदानी र कार्यकर्ताको त्याग र तपस्यामा उभिएको पार्टी हो । पार्टीले गर्ने निर्णयमा आम कार्यकर्ताले चासो राख्नू स्वभाविक मात्रै होईन उहाँहरूको अधिकार पनी हो। सरकारले भर्खरै गरेको राजदूत नियूक्ती प्रक्रियाले सबैलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ। आशा लामा भन्ने ब्यक्तीका बारेमा अहिले धेरै प्रश्नहरू उब्जिएको छ। पहिलो(बैदेशिक रोजगार ब्यावसायी संघको निर्बाचनमा एमालेको कोटाबाट चूनाव जितेकी यि ब्यक्ती कहिले काँग्रस भईनरु दोस्रो(म्यानपावर संचालन गरेर बसेको ब्यक्तीलाई राजदूत जस्तो सम्मानित पदमा नियूक्ती गरेर पठाउँदा यसले कस्तो सन्देश जान्छ ? र काँग्रेसको साख कहाँ पूग्छ ? अर्कोतर्फ राजदूत नियूक्तीमा समावेशी सिद्धान्तलाई पनी लत्याउँने काम गरियो। संसदिय सूनूवाई समितीले पनी यसलाई गम्भिर रूपमा लिनूपर्छ। यो घट्नाले पार्टी संस्थागत रूपले नचलेको प्रश्ट्र हून्छ। संबेदनशिल र राष्ट्रिय महत्वका कूनैपनी बिषयमा निर्णय गर्दा केन्द्रिय समितीमी छलफल हूनूपर्नेमा त्यो हून नसक्नू र पार्टी बेथिती ढंगले अगाडी ढंगले दूर्भाग्य हो।